Izikhungo - Beijing Ca-Long Engineering Machinery Co., Ltd.
Njengenye yezinto ezibalulekile ze-AMP, ukusebenza kwayo okuhle kuyadingeka kakhulu. Idizayini yethu iyinhlanganisela yamandla adonsela phansi ayisisekelo nesihlungi sesikhwama sesibili, esihlangabezana nazo zonke izidingo zemvelo eChina kanye nasemazweni aseYurophu. Ngaphansi kwezimo zokusebenza ezijwayelekile, ukugxila kokukhipha endaweni yokuhlunga yomoya kungafinyelela ku-20mg / m ejwayelekile3 futhi okungcono kakhulu.
Ukuqinisekisa ukusebenza kwesihlungi, sikhetha izikhwama zokuhlunga ezenziwe nge-American Dupont material Nomex, enokusebenza isikhathi eside nokusebenza okuhle kakhulu.
Emayinini amabili edlule, sifake eFinland amasethi esihlungi e-Finland ukuvuselela isitshalo esidala sokuxuba i-asphalt. Umkhiqizo wethu ungahlangabezana nazo zonke izidingo zendawo ezungezile futhi udunyiswe kakhulu ngumsebenzisi.
Hot kubhayela kawoyela
Ubhayela kawoyela oshisayo usetshenziselwa ukufudumeza amathangi ebitume ngamafutha ashisayo, azungeza emapayipini wohlelo lokushisa namathangi ebitume. I-Boiler ifakwe ithangi lokunweba eliphakeme kanye nethangi lokugcina elisezingeni eliphansi, eliqinisekisa ukuphepha nokusebenza kahle okuphezulu.
Ngokuqondene nesishisi, sibambisene nomhlinzeki womkhiqizo odumile emhlabeni ovela e-Italia, eBaitur. Uhlobo lukaphethiloli luyakhethwa kumafutha akhanyayo, uwoyela osindayo kanye negesi yemvelo. Ukuthungela nokulungiswa komlilo kulawulwa ngokuzenzekelayo.
Umthamo we-boiler ngu-300,000 Kcal / h - 160,000Kcal / h.
Uhlelo Oluhlanganisiwe Lokwengeza
Granuated lengetiwe system uqeda weighting futhi ethutha lengetiwe. Ukuze uthole i-asphalt yokusebenza ephezulu, izithasiselo, ezinjengeViatop, iTopcel, zingangezwa kwinqubo yokukhiqiza i-asphalt.
Izithasiselo ze-Granulate zondliwa nge-hopper ehlukile, okokuqala kwi-silo yesitoreji, bese kudlula ngamapayipi nange-valve yovemvane, izithasiselo zizongena ku-hopper enesisindo. Ngosizo lokulawula ikhompyutha, izithasiselo zizofakwa ku-mixer.
Isitshalo seCa-Long sinezixhobo zomkhiqizo ezidumile emhlabeni, ezinempilo ende.
Njengenjwayelo, sinamasheya azo zonke izinhlobo zezinhlaka zesidingo esiphuthumayo seklayenti, ngakho-ke iklayenti lethu lingathola iziphesheli ngokushesha okukhulu nge-airway.
Isici esiyinhloko sohlelo lokulawula lweCa-Long lwe-AMP isikhombimsebenzisi sayo somuntu onobungane, esidunyiswa kakhulu ngabasebenzisi beCa-Long AMP. Singanikeza ngenkonzo yokuvuselela uhlelo ku-AMP yanoma iluphi uhlobo lwesiNgisi noma lwesiRussia.
Ngokuthuthukiswa komkhakha we-AMP, isitshalo esidala sizovuselelwa ukuhlangabezana nezimfuno ezintsha futhi songe izindleko ekuthengeni isitshalo esisha. Okokuqala, singanikeza noma iyiphi ingxenye ye-AMP ukufanisa isitshalo esidala. Okwesibili, singangeza uhlelo lwe-RAP kunoma iyiphi i-AMP endala yokonga izindleko zokukhiqiza. Okwesithathu, noma iyiphi i-AMP ingabuyekezwa isitshalo sohlobo olungayilimazi imvelo ukuhlangabezana nezidingo ezintsha zemvelo.